Alert nke a ojoro na-eji a Google nrite dị ka nri azụ | Gam akporosis
Googled | | Noticias, Nche
Ajọ usoro ọhụụ ohuru na-aga n’Intanet na iji a fake google onyinye dị ka ọnyà maka ndị ọrụ iji taa. Dị ka kọrọ site Ngalaba Steeti nke Mpụ Elektrọnik na Kọmputa, ọtụtụ ndị ọrụ emeela ka ndị nwe obodo mata na ha wepụtara ozi ịgha ụgha site na Google ebe ekwesiri ka onye nnata nata onyinye.
Otú ọ dị, Google ekesala onyinye ọ bụla na nso nso a. Email ahụ na-ekwu na ihe nrite ahụ na-ekesa site na nchọnchọ na ụbọchị ncheta ya (ihe zuru oke, ebe Google malitere ịrụ ọrụ n'otu Septemba) ma kwenye na onye ọrụ ahụ bụ onye mmeri nke ihe nrite a na mberede.
Otú ọ dị, ọ bụghịkwa Google ọ na-enye onyinye ma ọ bụ na-eme ụdị ule ọ bụla. Ozi a bu ihe ojoro ịkọ nkọdịka ozi ahụ gwara ndị nnata ka ha kpọtụrụ onye isi ụlọ ọrụ na-ahụ maka ego wee zipụ ego tupu oge eruo. Site na nke a, ndị aghụghọ ahụ jisiri ike ijide data nkeonwe anyị ma zuo ego anyị.
Yabụ ugbu a ị mara, ọ bụrụ na ị nweta email dị ka nke a, azaghachi ma ọ bụ nye data nkeonwe gị, Google Ọ naghị ekesa ụdị ihe nrite ọ bụla, ọ bụ ojoro.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Nkuzi » Nche » Alert nke ojoro nke jiri ihe nrite Google dika nri
Enwetara m ọkwa iji bụrụ onye mmeri nke otu onyinye nkwalite Google na kọntaktị ahụ bụ Brianhookson@yeah.net, M na-eche na ọ bụ wayo
Zaghachi Martín García Reyes
Kedu ihe ị na-eme ma ọ bụrụ na ị na-enye data gị?
Enyere m data m
Gịnị ka m kwesịrị ịme? M nyere data m
Anọ m na-aga na ịntanetị ma ha zitere m mgbasa ozi Google ebe m ga-aza ajụjụ 3 iji nweta ihe nrite.
Ha na-ajụ maka ozi dịka: telifon na adres
Gịnị ma ọ bụrụ na m na-enye ha?
Enyerela m ozi m ma ụjọ na-atụ m, enweghị m akaụntụ akụ na Mexico, yabụ achọrọ m ma ọ bụ nyere m aka biko.
Kedu ihe m kwesịrị ịme. Biko gwa m na o kwusighi ikwa akwa n'ihi nchegbu
Adị m obere ma nne m kụziiri m ka m ghara ịdaba na egwuregwu ndị ahụ ... ọ ga-atọ ụtọ na enweghị m mmasị xD
IPhone 8 nke $ 53.000 mere ozi dịka .. ọ dị m ka ọ bụghị nchekwa na izipu nke. $ 1
Echere m na ọdabara ... mgbe ị naghị eji kaadị gị zụọ ihe n'ịntanetị ...
Ndi dara ada buru nwanyi, ndi anyaukwu amaghi !!!!
Kedu ihe ha na-eme mgbe ha na-enye data ???????
Taa, Septemba 10, 2020, enwetara m na Google na m meriri iPhone 11… Na m banyere email m iji gbapụta ihe nrite m… .i nyela ozi m… kedu ihe na-eme?
Zaghachi Aída Lorena Olmedo
[Video] Otu esi eji nsụgharị weebụ nke WhatsApp, achọrọ APK gụnyere